Dhageyso:-Dowladda Somalia oo ka jawaabtey Warkii Ardayda Shiinaha | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso:-Dowladda Somalia oo ka jawaabtey Warkii Ardayda Shiinaha
Dhageyso:-Dowladda Somalia oo ka jawaabtey Warkii Ardayda Shiinaha
Safiirka Soomaaliya ee dalka Shiinaha ayaa ka jawaabey hadal kasoo yeeray qaar kamid ah Ardayda Soomaaliyeed ee ku nool Magaalada Wahun ee dalka Shiinaha halkaas oo uu ka dilaacey Cudurka Coronavirus.
Ardayda ayaa waxaa ay sheegeen iyaga oo la hadlayay Warbaahinta ee Magaalada Muqdisho in dowladda Soomaaliya ay dayacdey,kadib markii dalalka badankood muwaadiniintii ka joogtay Shiinaha ay kala baxeen dalkaas.
Safiirka Soomaaliya ee dalka Shiinaha Danjire Cawaale Cali Kullane ayaa waxaa uu sheegay in xilligaan aysan fududeyn in ardayda Soomaaliyeed db loogu soo celiyo Gudaha dalkood,isla markaana uu beeniyey in aysan ka warqabin Safaarada Soomaaliya ee dalka Shiinaha.
“Waxaan ognahay Dhalinyarada Soomaliyeed ee Wuhan ku sugan qof cudurkii qaba ma jiro laakiin ma jiro qab looga soo qaadi karo magaaladaas oo magaalo kale oo gudaha dalka China ah loo geyn karo dadku inay sidaas u fahmaa ayaa muhiim ah oo aysan ahayn dowladda Soomaaliyeed waxaa ay ka gaabisay in dadkaas diyaarad loo diro ama la tixgaliwaayay”
Hoos Ka Dhageyso Codka Safiirka Soomaaliya ee dalka Shiinaha Danjire Cawaale Cali Kullane.
Previous articleWasiirka Amniga Jubbaland oo gaarey Beled-Xaawo
Next articleSAWIRO:-Guddiga doorashooyinka Qaranka & Safiirka Sweden oo kulan yeeshay